Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment होलीको अनौठो परम्परा ! - Pnpkhabar.com
होलीको अनौठो परम्परा !
भक्तपुर, भक्तपुरको तचपाल दत्तात्रयस्थित भीमसेन मन्दिरमा दलिनमा पुरुष लि’ङ्’गको प्रतीकस्वरुप काठ झुड्याइएको छ ।
काठको बीचमा रातो योनी आकारमा प्वाल परेको कपडा पनि झुड्याइएको छ । योनी आकारको कपडामा काठको लि’ङ्’ग छिराएर राखिएको छ, त्यसलाई हल्लाउँदा काठ कपडामा बाहिरभित्र गर्ने गर्छ ।
यो लि’ङ्’ग जस्तो देखिने यसको टुप्पोमा थोरै कपास पनि झु’ण्ड्याइएको छ । यौनसम्पर्क गर्दा विर्य’स्खलन भएको जस्तो देखिने गरी प्रतिकका रुपमा टुप्पोमा सेतो कपास झु’ण्ड्याइ राखिएको चित्र स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
भीमसेन गुठीले फागुन शुक्ल अष्टमीका दिन मन्दिरमा राखिएको तीन हात लामो ३० इञ्च मोटो काठबाट बनेको लि’ङ्’ग र कपडाबाट बनेको योनी झु’ण्ड्याएर राख्ने परम्परा छ । यसलाई स्थानीयले महाभारतका पाँच पाण्डवमध्येका भीमसेनको लि’ङ्’ग र द्रौपदीको योनीको प्रतिकका रुपमा लिने गरेको बताउँछन् ।
यो चित्र हेर्दा अश्लिलता प्रदर्शन गरेको जस्तो देखिए पनि भक्तपुरका बासिन्दा भने यसलाई धार्मिक मान्यताका रुपमा लिँदै आएका छन् । यो लि’ङ्’गको दर्शन गर्न पुरुष मात्र होइन महिलासमेत फागु पूर्णिमाको दिनसम्म हरेक दिन बिहान त्यहाँ पुग्ने गर्दछन् । स्थानीयवासी त्यहाँ जान्छन्, लि’ङ्’गको दर्शन गर्छन् र भेटी चढाएर फर्किने गर्छन् ।
भीमसेनको लि’ङ्’ग र द्रौपदीको योनीको प्रतीकको दर्शन गरे व्यापार बढ्ने विश्वास रहेको छ । यौन क्रियाकलापको आकर्षण थियो, त्यसमाथि वसन्तऋतुमा मानिसको मात्र नभई चराचुरुङ्गी र पशुपक्षीमा पनि कामवासना हुन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा भक्तपुरको यो परम्परा परापूर्वकालदेखि नै चल्दै आएको छ ।
“यसरी ढोग्दा सन्तानको सुख र दीर्घायु हुन्छ भन्ने सुनेको छु, पसल पनि राम्रो चल्छ नी ।” यो यौन समागमको प्रतिक मानिने कलात्मक चिह्न भक्तपुरको होली संस्कृति र जीवनशैलीसँग मात्र नभई प्रजनन स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको स्थानीयको भनाइ छ ।
केही वर्षअघिसम्म यो लि’ङ्’गलाई भीमसेनको पाटीमा बाहिर झुण्ड्याउने गरिन्थ्यो र हरेक दिन बिहान भजन गाउँने गरिन्थ्यो । यसरी बाहिरै झुड्याउँदा महिलालाई हिँड्डुल गर्दा अप्ठ्यारो भएको गुनासो आएपछि केही वर्षयता मन्दिरमा ल्याइएको छ । हाल त्यसलाई मन्दिरको माथिपट्टि पहिलो तलामा झुन्ड्याउने गरिएको छ ।
उक्त मन्दिरमा लि’ङ्’ग हेर्न आउने नेपाली नागरिकसँग १० रुपैयाँ र विदेशीसँग ५० रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ । भीमसेन मन्दिरमा यही लि’ङ्’गको संरक्षण, यो लि’ङ्’गको संरक्षण गर्न गा’ह्रो भएको स्थानीयको भनाइ छ, गा’ह्रो भए पनि यो त यहाँको परम्परा हो, बचाइराख्नुपर्छ ।
स्थानीय भन्छन्, “यसको संरक्षणमा कसैले चासो दिएन, यो पर्व चलाउन न त भक्तपुर नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ, न गुठी संस्थानले नै । यसको संरक्षणका लागि शुल्क तोके पनि शुल्क तिर्दैनन्, पूजा गरेर ढोगेर पाँच १० रुपैयाँ चढाएर जान्छन्, त्यसैको भरमा कसरी पर्व चलाउनु, परम्परा धान्न नै दिनप्रतिदिन गाह्रो हुँदै गएको छ ।”
यो लि’ङ्’ग हरेक वर्ष संरक्षण गरेर राखेर पर्व चलाउनुपर्ने तर सहयोग भने कतैबाट नआएको गुनासो छ । लि’ङ्’ग जोगिए पनि परम्परा भने जोगिएको छैन । भीमसेनको पार्टीमा गाउने गीत, भीमसेनको लि’ङ्’गलाई बजार डुलाउने परम्परा भने हराउँदै गएको छ ।
“भीमसेन देया लज खङ्गलो वानला ल्याँसे, बिस्युवाने म्वायक सो झायला”–अर्थात् “भीमसेनको लि’ङ्’गले मन लोभियोकी, भाग्नु नपर्ने गरी हेर्न आउनु भएकी ।” भक्तपुरको दत्तात्रय मन्दिर अगाडिको भीमसेन मन्दिरको पाटीमा प्राय गाउने गरिएको यो गीत हिजोआज सुन्न छाडिएको स्थानीयको भनाइ छ ।
भीमसेन मन्दिरको पार्टीमा बसेर भीमसेन गुठीका गायजुले होली पर्व शुरु भएको दिनदेखि पूर्णिमासम्म यो गीत गाएर होलीको आगमन र बिदाइ गर्ने परम्परा अहिले एक किसिमले भन्नुपर्दा हराइसकेको छ । होली पूर्णिमासम्म सात दिनसम्म भक्तपुरमा चल्ने फागु अर्थात् होली पर्व हेर्न र सङ्गीतमा रमाउन स्थानीय सधैँ जम्मा भएर गाउने गीत हराएको स्थानीयको भनाइ छ ।
“अहिले यहाँ होलीमा न गीत गाउँछन्, नत यहाँको होली परम्पराको संरक्षण नै भएको छ, यो परम्परा धान्न पनि निकै गाह्रो भएको छ, कसैले सहयोग गर्दैन, न नगरपालिकाले सहयोग गर्छ, न गुठी संस्थानले, यहाँ चढाएको पाँच, १० रुपैयाँले कसरी परम्परा धान्नु ।” स्थानीय भन्छन् ।
यो लि’ङ्’गलाई दुई जनाले काँधमा बोकेर इनाचो, बाचुटोल, जेँला, जगाति, ब्रम्हायणी, च्यामासिंह हुँदै, तचपालस्थित दत्तात्रय मन्दिर वरिपरि रहेको घर र पसलमा घुमाउने परम्परा पनि हराउन थालेको छ ।
यसरी टोलटोलमा ल्याएपछि भीमसेनको लि’ङ्’गका रुपमा दर्शन गर्ने परम्परा छ । घर र पसलमा घुमाएको लि’ङ्’गलाई भक्तजनले स्पर्र्श गरी ढोग्ने र दान दक्षिणा दिने गर्दछन् । यसरी घुमाउने वर्षौंदेखिको परम्परा लोप हुने र संस्कृतिमा विकृति पस्ने चिन्ता यहाँका बासिन्दालाई छ ।
“जीवनमा यौन अनिवार्य आवश्यकता हो, यौन अर्थात् यौनजन्य क्रियाकलाप त सिर्जना नै भएकाले भगवान्को पालामा पनि थियो र मान्छेको पालामा पनि छ । यौनको आवश्यकता किराफट्या’ङ्’ग्रा देखि पशुपक्षीमा समेत छ । यौनविनाको जीवन अधुरो हुन्छ । भीमसेन मन्दिरमा परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको यो परम्पराले यौनको महत्वलाई अझ फराकिलो पारेको छ”, स्थानीय भन्छन् ।
फागुपूर्णिमाको दिन साँझपख दत्तात्रय मन्दिर अगाडिको भीमसेनको मन्दिरबाट लि’ङ्’ग निकाली एक व्यक्तिले बोकेर ब्रम्हायणी मन्दिरस्थित खोलामा लगेर पखाल्ने र पुनःमन्दिरमा राख्ने परम्परा छ ।
यसरी मन्दिरबाट खोलासम्म लि’ङ्’ग बोकेर लैजाने व्यक्तिलाई त्यस वर्ष छोरा जन्मन्छ भन्ने जनविश्वास अहिलेसम्म पनि रहेकाले लि’ङ्’ग बोक्न छोरा नहुनेको भीड लाग्ने गर्दछ । लि’ङ्’ग पखालेर भीमसेन मन्दिरमा ल्याएपछि यस वर्षको होली समाप्त हुने गर्दछ ।
भीमसेनको मन्दिरको स्थापना १७औँ शताब्दीमा राजा जगतप्रकाश मल्ल निर्माण गरेको इतिहासमा उल्लेख छ । भक्तपुरको मौलिक शैलीको होलीको प्रचलन त्यही समयदेखि भएको अनुमान गरिएको छ ।
मल्लकालीन समयमा ने.स.७८१ र ७९२ मा लेखिएका होलीसम्बन्धी गीत पाइएका कारणले यसको थप पुष्टि हुने बताउँछन् । वसन्त ऋतुको आगमन फागुन महिनादेखि हुने भएको र यो समय यौन ऊर्जाको समय मानिने भएकाले पनि होली पर्वसँग यसको सम्बन्ध रहेको यहाँका संकृतिकर्मीको भनाइ छ ।